QOLKA KULEYLKA EE SHINNIDA: WAA MAXAY, SIDA UU U SHAQEEYO, SIDA LOO SAMEEYO NAFTAADA - BEEKEEPING
Daaweynta kulaylka ee beeska ka soo cayayaanka Varroa: sida loo sameeyo aqalka kuleylka leh gacmahaaga
Cayayaanka, sida noolaha kale, waxay inta badan saameynayaan ma aha oo kaliya cudurada bakteeriyada, laakiin sidoo kale cayayaanka ka sii daraya caafimaadka iyo kordhinta dhimashada.
Maanta waxaan ka hadli doonaa waxa ku saabsan qolka kuleylka iyo sida ay u hagaajinayso caafimaadka cayayaanka. Aynu ka hadalno habka shinnida oo kuu sheegi doona sida loo abuuro unug guriga.
Tilmaanta iyo mabda'a hawlgalka
Si uu u bilaabo, waa maxay qolka kuleylka?
Beeraha bilowga ah ma ogaan karo in cayayaanka badanaa ay saameeyeen cayayaanka kala duwan ee u baahan in la dagaallamo, haddii kale waxaad luminaysaa dad aad u tiro badan, ama waxaad heli doontaa gebi ahaanba jiran oo aan awood u lahayn soo saarida qadarka la filayo.
Wax badan ka baro daroogooyinka loo isticmaalo shinnida: "Apira" (daroogo fududeynaya qabashada xayawaanka xilliga firaaqada), "Apimax" (beerto amaan ah oo waxtar leh, kaas oo badbaadinaya Pasika caabuqa iyo dulinka) iyo "Bipin" - (daawo loogu talagalay si loola dagaallamo shinnida varroa).
Qolka kuleylka - Tani waa sanduuq yar oo u eg sida karriinka gaasta oo yar oo aan lahayn gubi. Waxay leedahay muraayado quraarado ah oo kuu oggolaanaya inaad ilaaliso geeddi-socodka, iyo godadka, kaas oo kululeynaya iyo hawo-qaadasho. Awoodda waxaa soo saaraa koronto. Qalabkani wuxuu u shaqeeyaa sidan soo socota: ka dib marka aad dhigato shinbir shimbir ah oo leh cayayaanka ku jira, kamaradku si adag ayuu xiraa wuxuuna ku qabadaa ilaa 48 ° C. Habka kuleylka, dhexdhexaadinta u dhexeeya dhuumaha caloosha, halkaas oo qoyaanka loo yaqaan "varroa cler" oo deggan, kor u kaca. Natiijadu, natiijada, dul-ku-dul-nooluhu ma hayn karayaan shinnida waxayna hoos u dhacdaa. Nidaamkan waxaa loogu yeeraa "daaweynta kulaylka shinnida ee dulin."
Muuqaal cajiib ah oo kamarad ah ayaa ah in beesku aanay u dhaqmin heerkulka, sababtoo ah waa wax la aqbali karo. Isla mar ahaantaana, habka of bees ee qolka ayaa sidoo kale kordhisaa iska caabinta cudurada fungal, iyo sidoo kale hoos u dhigi boqolkiiba cayayaanka ay saameeyeen infekshinka viral.
Waa muhiim! Caarada ka dib marka la samaynayo waa in laga saaraa kamarad.
Kombiyuutarka dabka ayaa sameeya
Doorashooyinka la kala iibsaday waxaa lagu soo bandhigay suuqyada tiro aan ku filnayn, iyo xooggooda qiimaha aad ku qaadatid hacksaw iyo shay-bixiye. Sidaa daraadeed, waxaan sii baran doonaa in aan ku qabanno qolka kuleylka leh gacmahayaga.
Waxaad ubaahan tahay inaad bilowdo wixii wax soo iibis ah adoo iibsanaya qalabka iyo qalabka. Waxaan bixinnaa liis ah qalabka ugu kharashka badan ee waxtarka leh oo aad ka dhigi karto ikhtiyaarka ugu fiican ee qolka kuleylka:
Dhirarka qoryaha 3x3 cm
Plywood, 6 iyo 10 cm qaro weyn.
Kalsiyoon silikoon ah.
Nalalka qandhada 60 W waliba - 4daab.
Taageerada yaryar oo kale sida qaboojiyaha ee kombiyuutar sugan.
Qalabka ugu dambeeya waa la bedeli karaa heerkulbeegga, laakiin kiiskan, kharashka guud wuxuu kordhi doonaa.
Ma taqaanaa? Si aad u qaadato malabka hal qaaddo, laba boqol oo bees waa inay shaqeeyaan maalinta oo dhan.
Ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad sawirtid sawir muujinaya xajmiga dhabta ah ee qalabka. Tan iyo markii aan soo saaro qolka kuleylka si loo buuxiyo baahideena iyo qiyaas ahaan qoysas tiro badan, waxaa habboon in la cabbiro cabbiraha kugu habboon.
Marka aad go'aamiso dhererka, dhererka iyo dhererka dhismaha, waa inaad sii wadaa sameynta qaabka.
Iska yaree baararka iyo qaab dhismeedka.
Iska yaree jilibka 6 mm oo ku dheji darbiga derbiyada.
Qaado gabal 6mm ah oo jilicsan oo samee wareegsan ama jarjar laba jibbaaran, taas oo u adeegi doonta daaqad daawan.
Ku dheji galaaska ka baxsan cutubka, adigoo isticmaalaya qalin silikon ah. Waxaad u baahan tahay inaad ku dhejisid qaabka uu u gooyo qolofta, taas oo ka yar muraayadda, waxay ka hooseysaa hal galaas. Maaha mid nabdoon in lagu dhejiyo gudaha gudaha, sababtoo ah sharooto kasta ayaa sii deyn kara walxaha khatarta leh marka la kulaalayo.
Ku xir suumanka muraayada loo yaqaan 'gllued glass' si aad ugu daboosho qolka kuleylka.
Waxaan ka hooseeyaa farshaxan qaro weyn.
Baro sida loo dhiso gacmahaaga: waa beeyaal, jirid ah Daddan, rugta alpine, barwaaqa ah ee Varre, shaarib badan, iyo sidoo kale akhri sida loo dhiso qalab loogu talagalay shinni.
Marka xigta waxaan u baahannahay inaan saarno nalalka iyo taageeraha. Nalalka qandhadu waxay u adeegi doonaan sida kuleylka kulaylka ah, markaa waxaad u baahan tahay inaad udhigto dhinaca sare. Taageerada waa in lagu dhejiyaa hoosta, haddii kale cayayaanka badan ee ku dhici doona maqaarku way dhiman doonaan. Qaado 4 lamps iyo buurta geesaha sare. Xadhigga korontada waxaa lagu riixi karaa giraanta iyo banaanka meesha uu albaabku xiran yahay, ama ka sameysan karo albaab dheeraad ah oo la marin karo.
Ma taqaanaa? Bees waxay ubaahan tahay beekwux si ay u sameyso malabyo malab ah meel gaar ah.
Marxaladda ugu dambeysa, waxaan ku dhejineynaa heerkulbeegga si ay u fog tahay laydhka oo dhan isla waqti isku mid ah ayaa si muuqata u muuqda daaqada muuqaalka.
Sida albaabka, jirkiisa waxaa laga sameeyey baararka qoryaha, ka dibna balaashadda waxaa la dhigayaa on screws. Albaabka wuxuu ku xiran yahay xididada wanaagsan iyo xiraa mandheerta.
Qolka kuleylka ee daaweynta shinnida leh gacmahooda ayaa diyaar u ah.
Sida loo sameeyo daaweynta kulaylka
Marxaladda ugu muhiimsan iyo muhiimka ah waa daaweynta. Waa muhiim in la fahmo in haddii aadan isticmaalin qalabka xaraarada gaar ah, markaa waa inaadan ka guurin kamaradada xaalad kasta, haddii kale waxaad "shiileyso" shinni.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in la sheego waa in daaweynta la sameeyo iyada oo aan shinni ah. Marka hore, haddii ilmo-galeenka uu joogo, beesku wuxuu ku ururi doonaa kubad ku xeeran, sidaas darteed, heerkulka u dhexeeya iyaga ayaa kor u qaadi doona darajooyin dheeraad ah; Marka labaad, ilmo-galeenka ayaa si dhif ah u saameeya saxmada, sidaas darteed uma baahnid daaweyn. Waqtiga la shaqaynayo waa inuu ahaado 12 daqiiqo. Haddii ay u kacdo 18, markaas cayayaanka leh xiidmaha oo buuxa, ama shakhsiyaadka gaajadu way dhiman karaan. Sidaa darteed, haddii aan la yareeyn Karin, ka hor intaan la dhoofin waa lagama maarmaan in la qasbo bees si loo geeyo cunto dhexdhexaadiyaha ah iyada oo la adeegsanaayo qiiq, ama in la siiyo fursad ay ku duulaan wax yar si ay mindhiciradu u madhan yihiin.
Haddii aad qaadato daaweynta marka heerkulbeegga heerkulku hoos uga dhaco 11 ° C, markaa waxaad u baahan tahay inaad horay u sii dayso ilaa 18 ° C, haddii kale tikuhu wuxuu ku sii jirayaa cayayaanka. Heerkulka ka hooseeya 11 ° C, caaradu waxay ku dhacdaa anabiosis-ka mana u nugul heerkulka sare.
Waa muhiim! Dhiibaan diyaaradda ma aha, sababtoo ah waxay u dhiman doontaa heerkulka sare.
Tani waxay soo gabagabeyneysaa maqaal ku saabsan sida loo sameeyo kamarad iyo si habboon loo hirgeliyo beeska. Ha iloobin in nidaamkan uu walaac badan yahay, sidaa daraadeed maaha inaad ka fogaato khasaare ka dhex jira dadweynaha shinni, taas oo caadi ah. Isku day in aad wax ka barato waayo-aragnimada beeraleyda kale, si aad ugu oggolaato ugu yaraan qalad.